အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးနဲ့အပန်းဖြေချင်ပါတယ်ဆိုသူတွေအတွက် “Little Italy” – Trend.com.mm
Posted on October 14, 2018 October 10, 2018 by Noel
Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါညွှန်းပေးချင်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးကတော့ Little Italy ဆိုတဲ့ Romance ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်သလို ဟာသလေးတွေလည်းပါနေပါသေးတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းကိုပုံဖော်ထားသူတွေကတော့ မင်းသမီးချောလေး Emma Roberts နဲ့မင်းသားချော Hayden Christensen ပါပဲ။မင်းသားရောမင်းသမီးရော အချောတွေချည်းပဲ
ဒါရိုက်တာကတော့ Donald Petrie ဖြစ်ပြီး Alyssa Milano ၊ Adam Ferrara ၊ Gary Basaraba ၊ Linda Kash ၊Andrew Phung ၊ Cristina Rosato ၊ Danny Aiello နဲ့ Andrea Martin တို့ကလည်းပါဝင်အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။၂၀၁၈၊စက်တင်ဘာလကမှထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး Rating 5.7/10 ရထားတဲ့ကားလေးပါ။
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ “Little Italy”ဆိုတဲ့ဒေသလေးတစ်ခုမှာ Nikki နဲ့ Leo တို့က အတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေက ပီဇာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ Nikki နဲ့ Leo တို့ရဲ့အဖေနှစ်ယောက်ဟာ စီးပွားရေးပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်လာပြီး သဘောထားကွဲလွဲလာခဲ့ကြပါတယ်။
ငယ်ငယ်တည်းက ကစားဖော်ကစားဖက် Nikki နဲ့ Leo တို့ကလည်း အရွယ်ရောက်လာတော့
တစ်ယောက်က လန်ဒန်မှာ စားဖိုမှူးပညာသွားသင်၊တစ်ယောက်ကတော့ မိသားစုပီဇာလုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးဦးစီးနဲ့ အရင်လို တပူးပူးတတွဲတွဲမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Nikki လန်ဒန်ကနေ အိမ်ကိုခဏပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Leo နဲ့တွေ့ပြီး သံယောဇဉ်အမျှင်မပြတ်နိုင်စွာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခရက်ရ်ှခဲ့ကြပါတယ်။စီးပွားပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ မိသားစုနှစ်စုကြားမှာ သူတို့အချစ်ရေးက ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမလဲ? ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူးဖြူးနဲ့အချစ်ရေးကို ရှေ့ဆက်နိုင်မလား?မိသားစုနှစ်စုကြားမှာ ဘယ်လိုအထင်လွဲမှုတွေ၊ဘယ်လိုအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေ၊ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံလာဦးမလဲ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇာတ်မြူးလေးသဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အစားတစ်လိုင်းလေးတွေအတွက်လည်း ဒီကားထဲမှာပီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေချာပြသထားတာဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ဗိုက်ဆာလာမှာလည်းမလွဲပါဘူး။ပီဇာလေးစားရင်း ဒီကားလေးကြည့်ရင်တော့ ဂွတ်ရှယ်ပေါ့ဗျာ။Trailer လေးလည်း တင်ပေးထားလို့ ကြည့်လိုက်ပါဦး
Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ ဒီတဈခါညှနျးပေးခငျြတဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးကတော့ Little Italy ဆိုတဲ့ Romance ကားလေးပဲဖွဈပါတယျ။အခဈြဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈသလို ဟာသလေးတှလေညျးပါနပေါသေးတယျ။ဒီဇာတျလမျးကိုပုံဖျောထားသူတှကေတော့ မငျးသမီးခြောလေး Emma Roberts နဲ့မငျးသားခြော Hayden Christensen ပါပဲ။မငျးသားရောမငျးသမီးရော အခြောတှခေညျြးပဲ
ဒါရိုကျတာကတော့ Donald Petrie ဖွဈပွီး Alyssa Milano ၊ Adam Ferrara ၊ Gary Basaraba ၊ Linda Kash ၊Andrew Phung ၊ Cristina Rosato ၊ Danny Aiello နဲ့ Andrea Martin တို့ကလညျးပါဝငျအားဖွညျ့သရုပျဆောငျထားပါတယျ။၂၀၁၈၊စကျတငျဘာလကမှထှကျရှိလာခဲ့တဲ့ဇာတျကားလေးဖွဈပွီး Rating 5.7/10 ရထားတဲ့ကားလေးပါ။
ဇာတျလမျးပုံစံလေးကတော့ “Little Italy”ဆိုတဲ့ဒသေလေးတဈခုမှာ Nikki နဲ့ Leo တို့က အတူတူကွီးပွငျးလာခဲ့ကွပါတယျ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတှကေ ပီဇာလုပျငနျးလုပျကိုငျကွသူတှဖွေဈပွီး နှဈအနညျးငယျအကွာမှာတော့ Nikki နဲ့ Leo တို့ရဲ့အဖနှေဈယောကျဟာ စီးပှားရေးပွိုငျဘကျတှဖွေဈလာပွီး သဘောထားကှဲလှဲလာခဲ့ကွပါတယျ။
ငယျငယျတညျးက ကစားဖျောကစားဖကျ Nikki နဲ့ Leo တို့ကလညျး အရှယျရောကျလာတော့
တဈယောကျက လနျဒနျမှာ စားဖိုမှူးပညာသှားသငျ၊တဈယောကျကတော့ မိသားစုပီဇာလုပျငနျးကိုဆကျပွီးဦးစီးနဲ့ အရငျလို တပူးပူးတတှဲတှဲမဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ဒါပမေဲ့ Nikki လနျဒနျကနေ အိမျကိုခဏပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ Leo နဲ့တှပွေီ့း သံယောဇဉျအမြှငျမပွတျနိုငျစှာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ခရကျရျှခဲ့ကွပါတယျ။စီးပှားပွိုငျဘကျတှဖွေဈတဲ့ မိသားစုနှဈစုကွားမှာ သူတို့အခဈြရေးက ဘယျလိုတှဖွေဈသှားမလဲ? ဖွောငျ့ဖွောငျ့ဖွူးဖွူးနဲ့အခဈြရေးကို ရှဆေ့ကျနိုငျမလား?မိသားစုနှဈစုကွားမှာ ဘယျလိုအထငျလှဲမှုတှေ၊ဘယျလိုအမွငျကှဲလှဲမှုတှေ၊ဘယျလိုအခကျအခဲတှကွေုံလာဦးမလဲ စတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇာတျမွူးလေးသဖှယျကွညျ့ရှုရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ပွီးတော့ အစားတဈလိုငျးလေးတှအေတှကျလညျး ဒီကားထဲမှာပီဇာနဲ့ပတျသကျပွီးသခြောပွသထားတာဖွဈလို့ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး ဗိုကျဆာလာမှာလညျးမလှဲပါဘူး။ပီဇာလေးစားရငျး ဒီကားလေးကွညျ့ရငျတော့ ဂှတျရှယျပေါ့ဗြာ။Trailer လေးလညျး တငျပေးထားလို့ ကွညျ့လိုကျပါဦး